बच्चाहरु कम हुदैछन् , जनसख्याँ दर बिशेष « LiveMandu
१७ माघ २०७५, बिहीबार २१:३५
जीवनको भागाढौडमा छोराछोरी पाउने कुरालाई अहिलेका पुस्ताले झर्कोको अनि अनावश्यक तनावको रुपमा हेर्न थालेका छन् । मान्छेहरु स्वतन्त्र प्राणी त हुन तर स्वतन्त्रताको ओभरडोज भएर होला शायद पृथ्वीमा आएपछिका केही गहन अनि मुख्य जिम्मेवारीबाट मान्छे बिमुख हुँदै गएको छ । पछिल्लो दशकहरुमा जनसख्याँको चाप नियन्त्रणका लागी विश्वभर मारामार भइरहेको अवस्थामा अहिले आएर जनसख्याँको स्थिरता ठूलो चुनौति भएको छ । मान्छेहरुले बैवाहिक गृहस्थी जीवन र मातापिता बन्ने चाह त्याग्दै गएका पाउन थालिएको छ ।
छिमेकी राष्ट्र चीनले केही बर्षयता मात्र एकसन्तान निती हटाएको छ भने अन्य थुप्रै देशहरु जनसख्याँ बृद्धिकालागि प्रजजन दर अनि प्रजजन कार्य बढाउन लागीपरेका छन् । नेपालमा पनि केही दशक अघि जस्तो सार्वजनीक स्थान अनि परिवारमा पनि धेरै बालबालिका देख्न पाइन छाडेको छ । दुई सन्तान ईश्वरको बरदानबाट घटेर एक सन्तान पनि धेरै अफ्ठेरो अनि बिरलै देख्न थालिएको छ । आधुनिक बिश्वमा मान्छेहरु किन सन्तान पाउन बाट यस्तो डराउन थालेका हुन् ? अनि बिश्वका केही समृद्ध देशहरुले आफ्नो प्रजजन दर बढाउन के कस्ता उपायहरु अपनाइरहेका छन् त ? आउनुहोस बुझौं ।
विश्वका कूल २४४ राष्ट्रहरुमा आधा राष्ट्रहरु मात्र प्रतिस्थापन प्रजनन (रिप्लेष्मेन्ट फर्टिलीटी) को स्तरमा छन् र प्रजनन दर कम भएका राष्ट्रहरुले त्यसलाई वृद्धि गर्न र सन्तुलनमा राख्न विभिन्न नीतिहरु लागू गर्ने प्रयासमा छन् । रिप्लेष्मेन्ट फर्टिलीटी भन्नाले अगाडीको पुस्ता भन्दा पछाडीको पुस्ताको प्रजजन दर कम नहुनु हो । सामान्यतया एउटा परिवारमा या एउटा महिलाको औसत प्रजजन दर २ दशमलव १ बच्चा हुनुपर्दछ, तर यस भन्दा कम भएमा रिप्लेसमेन्ट फर्टिलीटी कम भएको मानिन्छ । जनसंख्याशास्त्रीहरुका अनुसार कुनै पनि ठाउँमा प्रतिस्थापन प्रजनन (रिप्लेष्मेन्ट फर्टिलीटी ) को अवस्था त्यो बेला कायम रहने छ जँहा नयाँ जन्मदरले मृत्युदरको अभाव पूरा गर्छ अथवा मृत्यु संख्याले जनसंख्या घटे पछि कुनै निर्दिष्ट नयाँ जन्मले जनसंख्या सन्तुलनमा राखेको अवस्था हो। विज्ञहरुका अनुसार कुनै राष्ट्रको प्रजनन दर लगभग २.१ रहँदा त्यतिबेलाको जनसंख्याले कुनै आप्रवासी जनसंख्या बिना राष्ट्र धान्न सक्ने क्षमता हुन्छ।
राष्ट्रहरुको आ–आफ्नो आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थाका कारणले प्रजनन दरमा भिन्नता देखिन्छ र कम भएका मुलुकहरुमा विभिन्न स्पष्ट देखि विचित्र लाग्ने नीतिहरु अपनाइएका छन्।
रुसको यूल्यानभ्स्क क्षेत्रमा हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १२ को दिन गर्भाधान दिवसको रुपमा बिदा दिइने गरेको एक दशक बढि भयो। यो बिदा सामान्य बिदा भने होइन। प्रजनन दर वृद्धि गर्ने सोचले सो दिन गर्भाधान निमित्त दम्पतीहरुलाई रतिको लागि प्रोत्साहन गर्न बिदा दिइएको हो र ठिक ९ महिना पछि अर्थात जुन १२ मा जन्म दिनेलाई केही आकर्षक पुरस्कारहरुको व्यवस्था पनि बनाइएको छ। अहिलेसम्म धेरै दम्पतीहरु सो दिनमा जन्म पुरष्कृत पनि भएका छन्। पुरस्कारमा सोही क्षेत्रमा उत्पादन गरिएको एसयूभी गाडी, टिभी, फ्रिज र वाशिंग मशिन जस्ता उपयोग्ग साधनहरु राखिने गरिएको छ। घट्दो प्रजनन दर रुसको लागि जनसंख्या नियन्त्रणमा एउटा समस्या हो र त्यसका लागि यस्ता सहितका अन्य सुविधाहरु पनि राष्ट्रले वाचा गर्दै आएको छ।
त्यसैगरी घट्दो प्रजनन दरलाई मध्यनजरमा राखेर डेनमार्कको एक ट्राभल कम्पनीले एउटा बोल्ड भिडियो नै रिलिज गरेको थियो। जसमा देशको कम प्रजनन दरलाई फोकस गरेर नागरिकहरुलाई गर्भाधान गर्न प्रोत्साहित गरे जस्तो बुझिन्छ र त्यसका लागि छुट्टीमा जान आग्रह गरेको छ। आफ्ना लागि सन्तान नजन्माए पनि डेन्मार्कका लागि गर ! भन्ने नारा राखेको भिडियोले साँच्चिकै डेनमार्कको जनसंख्या समस्यालाई दर्शाएको छ। प्रजनन दर १.७ रहेको डेनमार्कमा पनि सो कम्पनीको मार्फत कुनै होलिडे प्याकेज खरिद गरेर त्यो समयमा गर्भाधान हुन सफल भएमा आकर्षक पुरस्कारहरु प्रदान गर्ने पनि तोकेको छ। तीन वर्षसम्म डाइपर प्रदान गर्ने योजना पनि जनाएको छ।
प्रजनन दर २.४ भएको भारत उचित प्रतिस्थापन प्रजनन भन्दा माथि नै छ तर संयुक्त राष्ट्र संघले अनुमान गरे अनुसार सन् २०२२ सम्म चीन भन्दा धेरै जनसंख्या भारतको हुनेछ। यदि यो सत्य हुने हो भने चीन अनुसारको नीति भारतले पनि बिस्तारै सोच्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको स्थिति प्रजनन दरमा सन् १९६० मा ६.० रहेको थियो र सन् २०११ मा सर्वेक्षण अनुसार २.६ रहेको थियो। वर्ल्ड बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् २०१४ मा २.२ थियो। यो दर यसरि नै घट्दो हो भने धेरै युवाहरु विदेश पलयन भएसंगै नेपालले पनि बृद्ध जनसंख्या र नकारात्मक जनसंख्या बृद्धिको असर खप्नुपर्न सक्ने हुन सक्ला। सायद नेपाल सरकारले पनि त्यति बेला रोमाञ्चक वा स्पष्ट नीतिको बिकास गर्नुपर्ने होला।
हामी नेपालीहरुमा पनि क्रमश जनसख्याँ स्थाहि हुने समस्या शुरु हुन थालेको छ । बढ्दो डिभोर्स, आप्रवासन, ब्यस्तता, दम्पतीको साथै बिताउने कम समयको उपलब्धता अनि झन्झट मान्ने चलनले जन्मदर घटिरहेको छ जुन नकारात्मक कुरा हो ।
जनसख्याँका मापदण्डहरुमा नेपाली समाज अलिक अघि सर्तक हुने कि ?
यो पनि पढ्यौ